आ’खिर के भयो प्रचण्ड प’त्निलाई यस्तो? - jagritikhabar.com
आ’खिर के भयो प्रचण्ड प’त्निलाई यस्तो?
मा’ओवा’ दी के’ न्द्रका अ’ ध्यक्ष प्र’ चण्डका दुई छो’ रीहरू रे’णु दाहाल र गंगा दा’ हालले आफ्नी आमा सी’ ता दा’ हालको फोटो सा’ माजिक स’ ञ्जालमा फेसबुकमा सा’ र्वजनिक गरे । आमा क्या’ प्सन लेखेर सा’ र्वजनिक ग’ रिएको फो’ टोमा सीता दा’ हाल पहिले भन्दा धेरै क’ मजोर र दु ब्ला एकी देखिन्छिन् ।
सी’ ताको फोटो सा’ र्वजनिक भएपछि धेरैले उनको अ’ वस्थाबारे जि ज्ञा सा रा’ ख्दै स्वा स्थ्य’ लाभको कामना गरेका छन् । प्र’ चण्ड पत्नी सीता हाल चितवनमा छिन् । चि’ तवनमा दिदी रे’ णु दा’ हालको घरमा पुगेका बेला सो त’ स्वीर लिइएको गंगा दा’ हालले जा’ नकारी दिइन् । त्यस्तो कुनै स’ न्दर्भ नभई दिदीसँग भे’ टेका बेला सो तस्वीर लिइएको उनले बताइन् ।
आ’ माको स्वा’ स्थ्य अ’ वस्था सा’ मान्य नै रहेको छोरी गंगा दा’ हालले बताएकी छिन् । उनले भनिन्आ माको स्वा’ स्थ्य अ’ वस्था सा’ मान्य नै छ । फोटो हेरेपछि धेरै मान्छेहरु आ त्ति ए का छन्, त्यस्तो बिग्रिएको छैन । तौल केही घ टे को छ । दाहालमा वि’ गत ४ वर्षदेखि पा र्कि न्सनको स्वा स्थ्य स म स्या रहेको छ । उनी दु’ र्लभ स्वा स्थ्य स म स्या का रुपमा रहेको प्रो’ ग्रेसिभ सुपरन्यु’ क्लियर पाल्सी ९पी।एस।पी० बाट पी डि त रहेकी छिन् ।
चि’ कि’ त्सकहरूका अ’ नुसार यो स’ मस्या म’ स्तिष्कमा अ स र परेपछि हुने गर्छ । जसबाट मा’ नसिक अस’ न्तुलनका साथै हिड्न, बोल्न र निल्न समेत गा ह्रो हु ने गर्छ । यो स’ मस्या ६० बर्ष उमेर मा’ थिकालाई हुने चि कि त्सक हरु को भनाइ छ । ए’ कमात्र छोरा प्र’ काश दा’ हालको २०७४ साल मं सिरमा हृ’ दय घा’ त बा ट नि’ धन भएपछि उनमा स्वा’ स्थ्य स म स्या बढ्दै गएको थियो । २०७५ साल चैतमा उ’ नलाई उ’ पचारका लागि अ’ मे रि का ल’ गिएको थियो । त्यसपछि प’ टक प’ टक भारत लगिएको थियो ।